स्तनपान गराइरहेको समयमा राम्रोसँग भोजन गर्नु धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि तपाईंले जे खानुहुन्छ त्यो तपाईंको बच्चाले पनि खान्छ ! तपाईं जे खानुहुन्छ त्यसको सोझै असर तपाईंको दुध पिउने बच्चामा पर्छ । यो कुराले तर्साउन पनि सक्छ । तपाईं जे खानुहुन्छ, त्यसको बारेमा धेरै सावधानी अपनाउनु जरुरी हुन्छ, किनकि सबै खाद्य पदार्थ तपाईंको बच्चाको कमजोर तर बढ्दो पाचन प्रणालीले पचाउन सक्दैन । तपाईंको वरिपरि रहने हरेक व्यक्तिले तपाईंलाई क्यालोरीयुक्त भोजन खाने सल्लाह दिनेछन् जसले तपाईंको शरीरबाट दूध उत्पादनमा मद्दत गर्नेछ । तर के तपाईंलाई थाहा थियो कि तपाईंले जेसुकै खाएपनि त्यसबाट तपाईंको शरीर पर्याप्त दूध उत्पादन गर्न सक्षम छ ? तपाईंको शरीरले तपाईंको गर्भावस्थाको दिनहरूमा नै सबै बोसोहरू भण्डारण गरेर राखेको हुन्छ । वास्तवमा तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको लागि दूध उत्पादन गर्नको लागि अतिरिक्त क्यालोरीयुक्त भोजन गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । तथापि, तपाईंलाई कति क्यालोरी आवश्यक छ, यो कुरा पहिल्यै निर्धारण गर्न सकिंदैन । तपाईंको शरीरलाई नै तपाईंको आवश्यकता निर्धारण गर्न दिनुहोस् । तपाईं जतिपटक चाहनुहुन्छ त्यतिपटक खानुहोस्, जतिपटक भोक लाग्छ त्यतिपटक खानुहोस्, तर ती खाद्य पदार्थमा ध्यान दिनुहोस् जसले तपाईंको शरीरलाई पोषण तत्व दिन्छ, भोक मात्र शान्त गर्ने हैन । अप्रशोधित वा नफलेको अन्न, दाल, ताजा फलफूल, रेशादार अन्न, ताजा सागसब्जी र बियाँयुक्त फल छान्नुहोस् । बटरमिल्क, नरिवल पानी र ताजा जुसजस्ता प्राकृतिक पेय रोज्नुहोस् । ध्यान दिनुहोस् कि तपाईंले छनौट गरेको खाद्य पदार्थले तपाईंको शरीरलाई कार्बोहाइड्रेटबाहेक प्रोटिन, क्याल्सियम र आइरनयुक्त पोषण प्रदान गर्नुपर्छ । काजु, बदाम, किसमिस, पिस्ताजस्ता सुख्खा तथा बियाँयुक्त फल ती परम्परागत खाद्य पदार्थ हुन् जुन सुत्केरी आमाहरूलाई दूधमा पोषकतत्वहरू बढाउन दिइन्छ । तिनीहरू प्रशस्त क्यालोरीको स्रोत हुन् र निश्चित रुपमा दूधको गुणस्तर र मात्रा बढाउन मद्दत गर्छ । तथापि, स्तनपान गराउँदाको समयमा आफ्नो नजिक पानीको बोतल वा केही जुस राख्नुहोस् । तपाईंले स्तनपान गराउँदाको समयमा शरीरले अक्सिटोसिन निष्कासन गर्दछ जसले तपाईंलाई तिर्खा लगाउँछ । त्यसैले स्तनपान गराउनुभन्दा पहिले पुनार्ताजा गराउने पेय पिउनुहोस् । धेरैजस्तो सुत्केरी आमाहरूलाई धेरै पानी पिउने सल्लाह दिइन्छ किनकि यसले स्तनमा दूध उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ । तथापि, स्तनमा दूध उत्पादन गर्न अतिरिक्त पानी जरुरी हुँदैन । जब तपाईं स्तनपान गराइरहनु भएको हुन्छ मदिराबाट बच्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ । रगत र स्तनको दूधमा मदिराको मात्रा तपाईंले पिएको ३० मिनेटभित्र नै उच्चस्तरमा पुग्छ र करिब चार घण्टापछि मात्र कम हुन्छ । तपाईंले स्तनपान गराइरहेको समयमा मदिरा पिउनु हुँदैन, तर पनि यदि तपाईंलाई मदिरा पिउने इच्छा भएमा बच्चालाई स्तनपान गराइसकेपछि मात्र पिउनुहोला । त्यसैगरी अर्कोपटक स्तनपान गराउनको लागि कम्तीमा चार घण्टा प्रतीक्षा गर्नुहोस् । घ्यू एउटा अर्को त्यस्तो पदार्थ हो जुन सुत्केरी आमाहरूलाई दूध उत्पादनको लागि खान प्रोत्साहित गरिन्छ । तर तपाईंले सन्तुलित भोजन गरिरहनु भएको छ भने धेरै घ्यू खान त्यति जरुरी छैन । स्तनपान गराइरहेको समयमा ग्याँसयुक्त पेय, चिया र कफी नखानुहोस् । त्यसैगरी जंक फूड र घरमा नपकाइएको खाद्य पदार्थ खानबाट पनि बच्नुहोस् । यी खाद्य पदार्थले तपाईंको भोक त मेट्छ तर कुनै वास्तविक पोषण प्रदान गर्दैन । स्तनपान गराएको समयमा जडीबुटीयुक्त चियालाई सुरक्षित पेय मानिन्छ । तरपनि कुनै पनि जडिबुटीयुक्त औषधि सेवन गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श गर्नुहोस् । स्तनपान गराउँदाको सममा नियमित रुपमा आइरन, फोलिक एसिड र क्याल्सियमको निर्धारित मात्रा लिन नभूल्नुहोस् । तपाईंको शरीरलाई धेरै मात्रामा भिटामिन सी, भिटामिन बी १२, जिंक र भिटामिन ए को आवश्यक पर्दछ । यी पदार्थहरू प्रशस्त पाइने खाद्य पदार्थ खाएर पनि तपाईंले यसको पूर्ति गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको डाक्टरले अतिरिक्त मात्रा लिने भनेर लेख्न पनि गर्न सक्छन् । गर्भावस्थाको समयमा बढेको तौल चिन्ताको विषय हुन सक्छ र तपाईंको गर्भावस्था भन्दा पहिलेको शारीरिक स्वरूप पाउन तपाईंले तौल घटाउन चाहनु हुनसक्छ । सन्तुलित आहारको माध्यम तथा हल्का व्यायामको सहयोगले तौल घटाउने कुरामा ध्यान दिनुहोस् । आफूलाई भोको नराख्नुहोस् । त्यसैगरी कडा व्यायामले रक्तप्रवाह र स्तनको दूधमा विषाक्त पदार्थ निष्कासन गर्न सक्छ । ध्यान दिनुहोस् कि तपाईंले आफ्नो पहिलेको वास्तविक तौल तब मात्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंको बच्चाले पूर्णरुपमा स्तनपान छोड्छ र ठोस आहार खान सुरु गर्छ । स्तनपान तपाईंको बच्चाको लागि सबभन्दा राम्रो विकल्प हो । यसले तपाईंको बच्चालाई सबै कुरा प्रदान गर्छ जुन उसलाई जरुरी हुन्छ र उसलाई सबै बिमारीबाट मुक्त राख्छ । स्तनपान गराउन लाज नमान्नुहोस्, यसलाई सही तरिकाले गराउनुहोस् ! तपाईंको शरीरले तपाईंले खाने राम्रो सन्तुलित आहारबाट स्तनमा दूध उत्पादन गर्न सक्षम छ र प्रशस्त क्यालोरी भएको खाना खुवाइरहनु पर्ने जरुरी छैन जुन सुत्केरी आमाहरूलाई खुवाइन्छ ।
Q मेरो र मसँग विवाह गर्ने मंगेतरको हिजो यौन सम्बन्ध भयो र आज उनको बिस्तारै रगत बगिरहेको छ । यसको कारण के हुन सक्छ ?? यो समयको बिन्दुमा बच्चाको लागि योजना छैन !! साथै हामीले यौन सम्बन्ध राख्दा सुरक्षित साधनको पनि प्रयोग गरेका थियौं । अनि म पक्का छु कि मैले भित्र विर्य स्खलन गरेको पनि छैन । कृपया मलाई मार्गनिर्देशन गर्नुहोस् ।
Q पखालाको उपचार गर्ने घरेलु उपचार विधि के हो ?
तपाईं पखाला लाग्दा धेरै तरल पदार्थहरु गुमाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईंको इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम र पोटाशियम जस्ता खनिजहरू पनि गुमाउनुहुन्छ । यसको लागि तपाईं चीनी र नुन मिसाइएको पानी मार्फत पानीको मात्रा पुर्याउने वा हाइड्रेटेड रहनु पर्छ । दहीले तपाईंको पेटमा अनुकूल किटाणु बनाउन सक्दछ । दूध, पनीर, र अन्य डेरी उत्पादनहरू नखानुहोस् । पर्याप्त आराम गर्नुहोस् । आन्द्रा सुन्निएको संक्रमणको उपचारको लागी क्यामोमाईल फूल राम्रो हुन्छ, र यसको रोकिएको खोल्ने एन्टीस्पेमोडिक गुणहरू पनि हुन्छ, त्यसैले क्यामोमाईलको चिया पखालाको बेलामा स्वस्थ हुन्छ । माड भएको खाना जस्तै पहिला नै पकाएर राखेको खाना वा टापियोका अन्नले तपाईंको पेटलाई सजिलो बनाउँदछ । ऐसेलु वा ब्लूबेरी एन्थोसाईनोसाईड्समा धनी छन्, जसको एण्टीअक्सिडेण्ट र एण्टीब्याक्टेरियाका गुणहरु, साथसाथैं ट्यानिन्सहरु हुन्छन्, जसले पखालालाई निको पार्दछ । सुन्तला छोडाएर बोक्राबाट बनेको चियाले पनि पाचन क्रियामा सहयोग पुग्ने जनविश्वास रहेको छ ।
Q मैले १० मिनेट अगाडि १०० मिलीग्राम भियाग्रा ट्याबलेट खाए । म यसको असर शरीरबाट हटाउन चाहन्छु । म यो कसरी गर्न सक्छु ?
तपाईं वास्तवमा नै धेरै गर्न सक्नुहुन्न । यसको प्रभावहरू हटाउन केही समय प्रतीक्षा मात्रै गर्नुहोस् । तिनीहरूले लगभग ४ घण्टामा हट्दछ ।